သခင်ဘလက်ချော ရဲ့ အလုံးကြီးများ (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သခင်ဘလက်ချော ရဲ့ အလုံးကြီးများ (၁)
သခင်ဘလက်ချော ရဲ့ အလုံးကြီးများ (၁)
Posted by black chaw on Mar 6, 2015 in Creative Writing, Politics, Issues, Society & Lifestyle | 26 comments
သခင်ဘလက်ချော ၏ ဒိုင်ယာလော့ခ် များ...။
နိုင်ငံရေး ကိစ္စ ဆိုတာမျိုးဟာ မဆွေးနွေးတာ အကောင်းဆုံးပါ ခင်ဗျာ…။
သားအဖ အရင်းတောင် အမြင်မတူရင်
ဓါးနဲ့ ထထိုးကြတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်ခင်ဗျ…။
အခု လောလောဆယ် ကျောင်းသားသပိတ် ကိစ္စ ကို
ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေ အမြင်မတူကြဘူးဆိုတာ အားလုံးအသိပါ…။
ထောက်ခံပါ…။ ထောက်ခံပိုင်ခွင့် အပြည့်ရှိတာပဲ…။
တချိ့က ကျတော့ ကန့်ကွက်ကြပါတယ်…။
ကန့်ကွက်ပါ…။ ဒါလည်း ကန့်ကွက်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ရှိတာပဲ…။
တချို့ကလည်း ကျောင်းသားသပိတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး
အသံတိတ် လေ့လာ နေတာမျိုးတွေလည်း ရှိနေတာပါပဲ…။
အဲလိုလူတွေကို ခြံစည်းရိုးခွထိုင်တယ်ရယ်လို့တော့ မစွတ်စွဲစေချင်ပါဘူး…။
ဘယ့်နှယ့် ကြီးတွေလဲ ဗျာ…။
ကျောင်းသားသပိတ်ကို ရပ်သင့်တယ် ထင်သူတွေနဲ့
ကျောင်းသားသပိတ်ကို ဘာလုပ်လုပ် ထောက်ခံမယ်ဆိုသူတွေ
အုပ်စု ၂ စုကွဲပြီး အငြင်းပွားစ ပြုနေပါပြီ။
အဲလို အုပ်စုကွဲသွားစေချင်တာက အစိုးရရဲ့ အဓိက ပစ်မှတ်လို့
ခင်ဗျားတို့ အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားကိုးတကြီးရှိတဲ့ နေရာမှာတူပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရကို အားကိုးလောက်စရာ မရှိဘူးလို့ ထင်တဲ့ နေရာမှာ
ဒီလို ညီညွတ်မှုမျိုးကို ဖြိုခွဲဖို့ ဆိုတာ အတော် ခက်ပါတယ်…။
အခု ခင်ဗျားတို့ သွေးကွဲစ ပြုနေပြီဆိုတာကိုရော သတိပြုမိကြပါရဲ့လား။
ဒီထက်ပိုပြီး သွေးမကွဲသင့် တော့ပါဘူး။
ထောက်ခံချင်သူက လည်း ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ်ထောက်ခံပါ။
ကန့်ကွက်သူတွေကလည်း ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ ကိုယ့် ကန့်ကွက်ပါ။
ကျုပ်လည်း ဝင်ပြောပြီးမှ သတိရတယ်
ဘာသာရေး နဲ့ နိူင်ငံရေး မငြင်းတာ အကောင်းဆုံး
လောလောဆယ် ကြောင်သား မြည်းချင်တယ်
အရေးထဲ ဆိုက်ကားဆရာနဲ့ လာတွေ့နေတယ်….
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အရှိန်အဟုန်ရပ်တန့်သွားစေဖို့နဲ့
၂၀၁၅ အတွက် လူထုအာရုံထွေပြားသွားစေနိုင်တဲ့အတွက်
ကျောင်းသားသပိတ်ကို မတ်လ(၁) ရက်နေ့ထဲက ရပ်စေချင်တာ။
သခင်ဘလက်ချော ဆိုတော့ သခေါဘလက်ခြင်ပေါ့နော်
အရင်တုန်းကတော့ သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဗမာ…..
ခုတော့ သခင်မျိုးဟေ့ တို့ဘလက်… လို့ဆိုလိုတာလား….
စု အတွက် မဲ တစ်ပြားကို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ စိတ်ချတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော့ ယုံသေးသားပဲ
ဒီ တစ်ခုပဲ ယုံတာနော်။
ကျန်တာတွေက ပြောင်းလဲ တတ်တယ်။
.နားစွန်နားဖျား သခင်ဂျီးကို ဆန့်ကျင်ဂျ
.ဒါနဲ့…သခင်ဘလက်ချောရဲ့ အလုံးကြီးများဆိုဒေါ့…မဲမဲဂျီးပေါ့နော် :op:
အရီးဒေါ်ပုံ… အောင်ရမျီ …
ဒီတစ်ခါ စာမေးပွဲမှာမှ အရီးဒေါ်ပုံ မအောင်ရင်..
ကျုပ်​တို့က​တော့ ရှင်းရှင်းဘဲ ။ မတရားမှု မှန်​သမျှ သီးမခံဘူး ။ မနိုင်​ရင်​ ​ချောင်းရိုက်​မယ်​ ။ ​ချောင်းရိုက်​လို့မရရင်​ fb ထဲက​နေ က​လော်​တုတ်​မယ်​ ။
ကွန်းမန့် ၀င်ရေးသွား ကြသူအားလုံး
ကွန်းမန့် ၀င်မရေးပေမယ့် ဖတ်သွားတဲ့သူအားလုံး
ထောက်ပဲခံခံ၊ ကန့်ပဲ ကွက်ကွက်၊
ဆရာနေကြီးလို ချောင်းပဲ ရိုက်ရိုက်
ကိုယ်စိုက်ပျိုးသမျှ ကိုယ်ရိတ်သိမ်းရမှာပါ ခင်ဗျာ…။
(ဝေါင်း ခေါ်ရက်လို့ ခေါ်သွားတဲ့ နာမည်မို့
ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး အသုံးပြုသွားပါတယ် ဗျာ…။
.ကဘချောရဲ့ ပို့စ်ကို ထုံးစံအတိုင်း ဟာသရေးမယ်ထင်လို့ မဖတ်မိဘူး။ ဟိုဘက်က ပို့စ်မှာ မန့်ခဲ့တာကိုပြန်ပြီး ပြောပါရစေနော်။
.ကွန်တစ်က လူပြောင်းရေးကို ဦးစားပေးတယ်။ ခေါင်းဆောင်ပေါ်ကို ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တယ်။ လစ်ဗြဲက ဖြစ်စဉ်ကို ဦးစားပေးတယ်။ အသွင်ပြောင်းစတိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်စဉ်မှန်ဖို့ လိုတယ်လို့ ယုံတယ်။ အဲဒါ နှစ်ခုကွဲနေတာပါ။ လူယုတ်မာ သူတော်ကောင်း နှစ်ခြမ်းကွဲတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
.အန်ကယ်ကြောင်က လူပြောင်းရေးကော၊ ဖြစ်စဉ်ကော နှစ်မျိုးစလုံးကို ဦးစားပေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် နည်းနည်းဂွကျသွားတာပါ။ အသွင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာ လူမှု+ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်တာရှိမှ ပြောင်းတယ်လို့ ခေါ်မှာလေ။ ဒါတွေ မဖြစ်ဘဲနဲ့ အသွင်ပြောင်းတယ်လို့ ပြောလို့ ဘယ်ရမလဲ။ ဒါကြောင့် အဘနီက ခုမှ စပြီ လို့ပြောတာ မှန်တာပေါ့။ .အခုလို ဆန္ဒပြတာတွေ သပိတ်တိုက်ပွဲတွေဟာ ဖြစ်နေမှ ဖြစ်စဉ်မှန်နေတာ။ ဥပမာ ပေါင်းအိုးကြီး သိပ်ပူလာရင် အဆို့ရှင်တွေ ပွင့်ထွက်ပေးရတဲ့သဘောပါ။ ဦးဦးပါလေရာကတော့ အချိန်အခါ မသင့်လို့ သဘောထားတယ်။ အဆို့ရှင်တွေလည်း ပွင့်ထွက်ရင်း ခေါင်းဆောင်လည်း ပြောင်းရင် အကောင်းဆုံးပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲလိုဖြစ်ဖို့ မွသဲတို့ကတော့ မယုံပြန်ဘူး။
.အမလတ်နဲ့ အပိုလို တို့ကလည်း အချိန်အခါ မသင့်ဘူးလို့ တွေးကြတယ်။ ကေကတော့ သဘောထား တင်းမာတယ်။
ဘာသာ​ရေး လူမှု​ရေး စီပွား​ရေး လူမှု​ရေး ​နိုင်​ငံ​ရေး ​တွေမှာ အစွန်း​ရောက်​​တွေများ​နေပြီ ။ ဒီ​တော့ ဆီး​ဆော ကစား သလို​ပေါ့ဗျာ ဘဲလ်​လင့်​ ညီ​အောင်​ ကျုပ်​က အခြား တစ်​ဘက်​စွန်းက ၀င်​ထိုင်​ကြည့်​မလို့ ။ ( တဂယ်​က ၀န်​ထိုင်​ခြင်​လို့ ဂို ၀န်​ထိုင်​ဒါဗျာ ကွာမျူနစ်​လို့ ​ပျောသူ ရန်​သူ )
(ခင်ဗျားတို့ သွေးကွဲစ ပြုနေပြီဆိုတာကိုရော သတိပြုမိကြပါရဲ့လား။)
အဓိကအချက်ကို လူတွေသတိပြုမိအောင် စီဂျေဘလက်ချော တာဝန်ကြေပါပေတယ်။
ရွာထဲမှာတော့ ဒီမိုသမားတွေ ပီပီ ကိုယ့်အယူအဆ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်ကို လွတ်လပ်စွာ တင်ပြကြရုံထက်ပိုပြီး သွေးကွဲနေပြီလို့တော့ မထင်ပါဘူး။
ရွာသူရွာသားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လို့ ပြောတာလေးတော့ သဘောကျတယ် သခင်ဘလောချက်။
(သူမတူအောင် မန့်ရမယ်လို့ သဂျီးအဆိုတော်ရှိထားလို့၊ စိတ်မဆိုးကြေး)
ကိုယ့်မောင် က စိုးရိမ်တကြီး ရေးထား တဲ့ မို့ ချက်ခြင်း မန့်မယ်ဗျား။
တစ်ပါတ်လုံး အကြွင်းအကျန် နဲ့ Frozen တွေ ချည်း မို့ ဒီနေ့ ဟင်းချက်ပေး မယ် ပြောထားလို့ ကျန်သူ များ အိမ် ကို နောက်မှ အေးအေး ဝင်လည် ဗျစီ။
ဒီမယ် သခင်ကြီး ဘလောချက် ရဲ့
ရှင့် အစ်မ က ရှေ့တန်း ကနေ ဟို ကြောင်စုတ် နဲ့ ငြင်း နေပေမဲ့ ဒင်း တစ်ကောင် ဟိုမှာ အေးခဲပြီး တောင့် ပြီး မလှုပ်နိုင် အမြီးကြီး တန်း နေမှာ ကိုလဲ လှမ်း စိုးရိမ် ပါတယ်။
ဒင်းကတော့ သူ့ ကလေး တွေ ထိလို့ ကျိန်ဆဲ နေရင် လဲ ခွေးလွှတ်ပါတယ်။
တစ်ကောင်ထဲ ချောင်မှာ ငို နေမှ ခက်မှာ။
နောက် ဇီကလေးတို့ မောင်မတ် တို့ ကတော့ သူတို့ ကို ဒီလောက်ချစ် တဲ့ ဒီ အရီး အကြောင်း ကို မှ နားမလည်ရင် တွေ့ချိန် နားရွက်ဆွဲ ပလိုက်မယ်။
တစ်ခြား ဘုသူ ရှိသေးလို့လဲ။
ဒီတော့ ကျုပ် ရဲ့ ချစ်သော မောင်
ရွာထဲ က လူ တွေ ကွဲ ဖို့ ကိုတော့ စိတ် မပူပါနဲ့။
သမိုင်းကြောင်း ထဲ မှာ Learning Curve တစ်ခု အတွက် ဝင်ပြီး သင်ယူ နေကြတာ ပါလေ။
တစ်နေ့ တော့ လဲ ဒါတွေ က စာမျက်နှာ တစ်ခု ဘဲ ပေါ့။
ကိုယ့် လမ်း ကို မှန်တယ် ထင်ရင် ပြီးတာဘဲ။ ရဲရဲ လျှောက်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ (အကြီးကြီး နော်)
ကိုယ့် အတ္တ ၊ ကိုယ့် ခံစားချက် က အများတကာ ကို ထိခိုက်နိုင်ရင်တော့ ဒါဟာ မှန်တဲ့ လမ်း မဟုတ်နိုင်တော့ဘူး။
Do you agree or not ?????
(Not ဆိုရင် သေပြီမှတ်) lol:-)))
ကိုယ်တိုင်က အစွန်းးပေါ်မှာ ဆိုတော့
လှုပ်မရလို့ ဘူပြောတာမှ လက်ခုပ်မတီးးးပေးးနိုင်သေးးလို့ပါ အရီးးရဲ့
@ အရီးလတ်, မမ, ၀င့်ပြုံးမြင့်, ခင်ဇော် ;;;;;;
ကျွန်တော် နိုင်ငံရေး ကိစ္စတို့ ဘာသာရေးကိစ္စ တို့ ရေးခဲပါတယ်…။
အခု ပညာရေးသပိတ်ကိစ္စ ကိုလည်း Facebook ပေါ်မှာတောင်
Like မလုပ်မိအောင် သတိထားပြီး ရှောင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…။
အခု မ၀င့်ပြုံးမြင့် ကွန်းမန့်ထဲက
လူယုတ်မာ သူတော်ကောင်း နှစ်ခြမ်းကွဲတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး
ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော့ နည်းနည်း ပြောချင်ပါတယ်…။
ကျွန်တော့် ပို့စ်ထဲမှာ အဲလို အဓိပ္ပါယ်ပေါက်စေတဲ့ စာသားမျိုး
ထောက်ပဲခံခံ…၊ ကန့်ပဲကွက်ကွက် အဲဒါဟာ
အဲဒါဟာ သူ့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ပဲလို့ ကျွန်တော်ရေးထားတာပါ…။
ကျွန်တော်လိုချင်တာက ထောက်ခံသူပဲဖြစ်ဖြစ် ကန့်ကွက်သူပဲ ဖြစ်ဖြစ်
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြစ်မပြောကြဖို့ပါပဲ…။
လိုရင်းမရောက်သွားတာကတော့ ကျွန်တော် စာရေးညံ့လို့ပါခင်ဗျာ…။
မင်း အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ပဲ အစွန်းပေါ်ရောက်နေနေပေါ့…။
အဲဒါ မင်း ရပိုင်ခွင့်ပဲလေ…။
အဲဒါ မင်း အပြစ်မှ မဟုတ်တာ…။
မင်းကြိုက်ရာကို မင်း အားပေးခွင့်ရှိနေတာပဲ…။
အဲလိုပဲ ကိုယ်နဲ့ အမြင်မတူသူတွေ ရှိနေခဲ့ရင်လည်း
အဲဒါ သူတို့ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ပဲလေ…။
ဆိုတော့…ပြန်လာခဲ့ပါ သူငယ်ချင်း…လို့ပဲ ပြောခဲ့ပါရစေ…။
ဒီပို့စ်မှာတော့ ကျေးဇူးတင်စကားပဲ ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါရစေခင်ဗျ…။
ဒီလိုပို့စ်မျိုး ကျွန်တော် မရေးပါဘူးခင်ဗျာ…။
ရွာထဲက လူငယ်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ထက်
သူတို့ကို ဆုံးမချင်ရုံသက်သက်လို့ တော့ ဖြင့်မထင်စေချင်ပါဘူး…။
မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေရဲ့ စုစည်းညီညွတ်မှု ကို ဘယ်လိုသွေးခွဲရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတဲ့
အစိုးရအနေနဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါပြီ…။
အဲဒီ နည်းလမ်းရဲ့ အစဟာ အခု ပညာရေးသပိတ် လို့ ထင်ပါတယ်…။
ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီရွာကွက်ကွက်လေးကိုပဲ မမြင်စေချင်ပါဘူး…။
ပို့စ်ရေးသူ ကျွန်တော်က ဥာဏ်ရည်နည်းနည်း နိမ့်ပါတယ်ခင်ဗျာ…။
အဲလို နိုင်ငံရေး ကိစ္စတွေမှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှု ဆွေးနွေးနိုင်စွမ်းလည်း
ထောက်ခံသူ ကို ထောက်ခံသူ
ကန့်ကွက်သူ ကို ကန့်ကွက်သူ စသည်ဖြင့် အဖွဲ့လေးးတွေ ဖွဲ့ကြရင်ကောင်းးဖူးးလားးး
ကွဲမယ့်ကွဲ ၂ ခြမ်းးတည်းးဆို နာမည်ပျက်တယ်..
အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ကွဲတော့ အေးးးရောာာာ
ဘာဘဲ ပြောပြော ရွာ လူ နဲ နဲ ပြန်စည်လာလို့ သဂျီးတော့ ပြုံးဖြီးဖြီး ကြီး ဖြစ်နေမှာ မြင်ယောင်မိသေး ..
@ ကထူးဆန်း ;;;
မတွေ့ရတာ အတော်တောင်ကြာပြီ ကိုထူးဆန်းရေ…။
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ရေးပေးသွားတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ…။
ကွဲမှတော့ ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်အောင် ဆိတ်စွမ်းအားရှင်တွေကို တာဝံလက်ပတ်နီ ထုတ်ပေးလိုက်ပါ ဦးဗီလာဘ်…။